Ciidamo lagu daadiyay Boosaaso iyo amar kaso baxay Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Saraakiil katirsan Puntland ayaa tilmaamay in sharciga la horgeyn doono Ganacsade kasta oo diida lacagta dalka, oo labo sababood loo qaadan waayay, kuwaasoo kala ah inay duugowday iyo in dowladda Canshuurta dollar ku qaado.
BOOSAASO, Soomaaliya - Taliska Ciidanka Booliska Gobolka Bari ee Puntland ayaa soo saaray Amar ka dhan ah Ganacsatada Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolkaas, oo saddex canshuur bixiya, midna Maamulka Deni ka qaado iyo Al-Shabaab iyo Daacish.
Xuseen Cali Maxamuud Taliyaha Booliska Gobolka, ayaa laamaha amniga amar ku siiyay inay xiraan Ganacsade kasta oo diida qaadashada lacagta Shillin Soomaaliga oo la sheegay inay qaar kamid ah Ganacsatada diideen.
Dad ku sugan Boosaaso ayaa soo weriyey in Suuqyada Magaalada saakay lagu daadiyay Ciidamo badan oo katirsan kuwa Booliska, oo loogu tala-galay inay la socdaan dhaq-dhaqaayada Suuqa iyo socodsiinta lacagta Shillin Soomaaliga.
Si kastaba, Amar uu soo saaray Taliska Booliska ayaa kusoo adaya, iyadoo qaar kamid ah magaalooyinka Puntland laga diiday Lacagta Shilin Soomaaliga, waxaana xusid mudan inay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado watay oo ay dhigeen dadka.